Wax walba waa in aad ogaato About Manager Device Android
Nidaamka qalliinka Android waxaa loo aqoonsan yahay calaamad aan ku qabno in tiknoolijiyada sida la tiro ka mid ah qaababka kala duwan ee qalabka hal hal siisaa dadka isticmaala ay. Iyadoo version cusub ee Android wax cusub ayaa la soo bandhigay ee suuqa. Oo bixiyaha Google ayaa sidoo kale soo bandhigtaa wax ka badan cajiib ah, Manager Device Android. Sidaas, cusboonaysiiso naftiina ku saabsan aqoonta isticmaalaya Manager Device Android halkan.
Qaybta 1. Waa maxay qalabka Android Manager Qeybta 2: sida loo sameeyo Android Manager Device Qeybta 3: Sida loo isticmaalo Device Android Manager Qeybta 4: Android lagu bedelan karo Manager Device Qeybta 5: Waxyaabaha Device Android Manager ma aan samayn karo - Maamul Android Qalabka Part 6 : MobileGo - Maareeyaha Device Android u PC
Qeybta 1: Waa Maxay Maareeyaha Device Android
Tababare Device Android wax yaabahan fiican ay bixiyaan Google si ay u caawiyaan milkiilayaasha Android siyaabaha soo socda:
* Track hoos meel ka mid ah qalabka Android aad la account Google ee loo isticmaalo maareynta qalab aad.
* Wac qalab Android aad loo eegin meesha ay ku taalo.
* Dib u celi password screen qufulka.
* U tirtiri soo baxay oo dhan xogta ku saabsan qalab Android aad.
Qeybta 2: sida loo sameeyo Maareeyaha Device Android
Tababaraha qalab Android Dejinta ma aha shaqo adag. Raac tallaabooyinka fudud ee hoose, iyo naftaada oo aad samayn kartaa
1. Calan Maamulaha Device Android internetka
Tallaabada 1. noqda adeegga goobta qalabka Android aad.
Tallaabada 2. Aayad in aad xisaabta Google ee la xidhiidha qalabka Android aad u tagtaan inaad
Tallaabada 3. qalab Android si toos ah u muuqan doonaan.
2. Calan Manager Android Device App
Tallaabada 1. Download Google Android Manager Device app ku saabsan qalabka Android ee Google ciyaari dukaanka app iyo rakibi.
Tallaabada screen Welcome 2.Waxaa muuqan doono
Tallaabada 3. Tubada aqbal oo aad diyaar u tahay inay sii ahaan doonaa.
Qaybta 3. Sida loo Isticmaalo Manager Device Android
Marka aad badiyay qalab Android aad, waxaad isticmaali kartaa Maamulaha Device Android inay sameeyaan waxyaabaha soo socda:
1. Helidda qalab aad
Tallaabada 1. Saxeex in aad xisaabta Google on
Tallaabada 2. Dooro qalab Android aad rabto in aad si ay ula socdaan.
Tallaabada 3. Meesha ay tahay aalad tusi doonaa on Google Maps.
2. Ring qalab aad
Under macluumaadka model, waxaa jira fursado qaar ka mid ah iyo dooran Ring, waxay ka bilaabataa durbaanada in mugga buuxa, xitaa haddii ay xiran yahay oo qarka u saaran inuu gariiro, waayo, 5 daqiiqo gudaheed. Waxaad ka raadsan kartaa qalab Android badiyay si fudud iyadoo ay xulashada haddii aad ku rid meel gurigaaga ama goobta shaqada.
Qalab 3. Lock Android
Haddii aad doorato Lock , sanduuqa wada hadal ku weydiin doonaa inaad dib sirta ah oo cusub oo dadka ma awoodi doonaan in ay helaan qalab aad.
4. masixi xogta shakhsiga ah ka qalab
Haddii aad doorato masixi , sanduuq wada hadal cusub ku weydiin doonaa inaad xaqiijin tallaabo ee tirtiro xogta oo dhan.
Qeybta 4: Android lagu bedelan karo Manager Device
Tababare Device Android ma aha mid aad rabto? Ha welwelin. Waxa jira waxyaabo beddelaad kale u helo telefoonada aad lumay!
Raadi My Phone Free 4.3 / 5
Cerberus Anti-Xatooyo $ .2.99 Xirmada 4.5 / 5
Raadi Droid Free 4.4 / 5
1. Raadi My Phone
App Tani waxaa loogu talagalay helidda telefoonka laga badiyay ama qalab. Waxa aad bixisaa si sahlan u arko qalab khariiradda Google by muujinaya in ay booska hadda. Waxaad ka helaysaa la xado ama uu lumo telefoon kasta ama qalab kale oo ay caawimo. Waxa aad u leedahay in la sameeyo waa in aad adigu iska diiwaan app ka dib rakibidda. Marka aad lambarka telefoonka aad u app aad loo raad raaco karo meel mar walba meel kasta! Si kastaba ha ahaatee, phone tani ma aad bixin xulashooyinka kale sida tirtiro xogta shakhsiga ama furo hannaankii shaashadda.
Sidoo kale, aadan awoodi karaan inay dhigay pin cusub oo loogu talagalay qalab aad ama ma waxaad wici kartaa qalab aad. Laakiin milkiilayaasha qalabka sii xariirta ay interface u sahlaysa in ay isticmaalaan taagdarro batari ugu yar.
Download Raadi My Phone ka Google Play Store >>
Tani app ee Kacaanka waxaa loo arkaa mid ka mid ah fursad kale oo fiican ee Manager Device Android. Waxaad ka wici kartaa telefoonka by jeestay mugga ringer si buuxda ama soo dir a heegan fariin qoraal ah si ay ula socdaan hoos u qalab aad. Waxa kale oo aad bixisaa goobta saxda ah ee qalab aad by u muujinaysa on Google Maps isagoo ku xiraaya wadataa GPS. Muuqaal kale oo laga cabsado ee app tani waa in ay bixisaa ku farriimaha wixii isbedel ah ee SIM kaar ama lambarka taleefanka si ay u hoos si fudud loo raad raaco karaa xitaa qof isku dayo in la isticmaalo.
Sidoo kale, waxaa aad bixisaa la feature ilaalinta sirta ah si aan ninna bedeli goobaha aad ku qeexan app oo aan sugida habboon. Oo waxaa kale oo ay bixisaa fursad u liis ay ku jiraan dadka u isticmaali kartaa qalab aad iyada oo qoraalka ah. App Tani waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee suuqa maadaama ay aad bixisaa iyadoo ay xulashada ah in meesha laga saaro xogta ka card SD ama xataa telefoonka fog.
Download Wheres My Droid ka Google Play Store >>
App Tani waa ka duwan oo kale oo leh tiro ka mid ah qaababka. Waxaad u koontarooli karaa iyada oo SMS ama internetka si ay u masixi xogta aad telefoon ama kaydinta kaarka SD ee. Waxa kale oo ay bixisaa feature ee dareysa telefoonka. Sida Wheres My Droid, waxa kale oo aad bixisaa fursado digniinta, wargelin email markii kaarka SIM la bedelo.
Download Android Khasaaray ka Google Play Store >>
4. Cerberus Anti-Xatooyo
App Tani aad bixisaa fursad u socdaan hoos u qalab aad. Waxay bixisaa aad tijaabo ah oo hal todobaad iyo in a $2.99 bixinta ugu yar ee isticmaalka uu nool yahay ka dib. Waxa aad bixisaa fursad aad ku soo wacayo digtoonaanta afuuftaan xitaa haddii aad telefoon ayaa lagu wadaa on hab gariirka ka. Sida labada barnaamijyadooda kor ku xusan, Cerberus sidoo kale marna masixi karin xogta aad. Sidoo kale, kugu xiri karaan qalab aad la code ah ilaalinta dheeraad ah. Muuqaal kale oo cajiib ah oo app tani ay tahay mid aad u in aad ugu shaqeyn karaan app this iyada oo loo marayo SMS, sidaa daraadeed waxa aan u baahnayn internet-ka.
Download Cerberus Anti-Xatooyo ka Google Play Store >>
5. Raadso Droid
Raadi Droid aad bixisaa meesha aad qalab taariikh hore, jaras doorasho alarm, tirtiro oo aad telefoon ama xogta card SD ee fog iyo sidhab ah qalab aad si fudud. Waxaad xakamayn kartaa qalab kala duwan leh account hal la app this.
Download raadso Droid ka Google Play Store >>
Qeybta 5: Waxyaabaha Manager Device Android ma aan samayn karo - Maamul Android Devices
Tababare Device Android waa xirmo buuxda ula tiro ka mid ah muuqaalada laga cabsado. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u oofin karin qaababka qaarkood:
1) ma waxa aad maamuli kartaa xiriirada, fariimaha, videos, sawiro, barnaamijyadooda, music.
2) ma aad xiriirada, fariimaha, videos, sawiro, barnaamijyadooda, music aad kari kartaa in gurmad.
3) Waxa aad uma soo diri kartaa fariimaha, soo dejinta Lugood playlist.
4) Waxaad heli karin qalab aad haddii la bakhtiiyey ama haddii internet-ka aan la heli karin.
Qeybta 6: MobileGo - Maareeyaha Device Android u PC
Wondershare MobileGo for Android Waa Manager Device Android u PC in ay sameeyaan waxa Manager Device Google Android ku guuldareysto gaaban.
Si fudud gurmad aad xiriirada, fariimaha, jadwalka taariikhda, abuse wac, videos, photos, music, iyo app iyo xogta app.
Ku dar, tirtirto, xiriirada dhoofinta, fariimaha, videos, sawiro, barnaamijyadooda, music iyo sidoo kale document files.
Dukaanka google play Access, YouTube iyo Baidu iyo web kasta oo aad jeceshahay.
Beddelaan audio iyo video.
Si toos ah dir farriimaha ka computer.
Hagaagsan aad playlist Lugood leh qalabka Android aad
Fiiro gaar ah: The version Mac ma waxaad warbaahinta gurmad iyo xogta app, waraaqaha ma ha. Wax macno ah ma helaan Google dukaanka Play, YouTube, iwm
Bedelka Lugood Music inay Android
Data kaabta ka Phone Android inay Computer
3 Siyaabaha SMS kaabta on Android Phone
Transfer Xiriirada / SMS ka BlackBerry in Android
> Resource > Android > Wax walba waa in aad Ogaato ku saabsan Manager Device Android